Mpitsabo nentim-paharazana: « Mihena ny isan’ny olona manatona anay », hoy Ramanjary Andréas | NewsMada
Mpitsabo nentim-paharazana: « Mihena ny isan’ny olona manatona anay », hoy Ramanjary Andréas
Anisan’ny tombony ho an’ny firenena tatsinanana ny fananana ireny mpahay raokandro ireny. Toa misy fifanoherana amin’ny tranga misy ankehitriny anefa izany…
Manana ny fahaiza-mampiasa ny raokandro eo amin’ny tontolon’ny fitsaboana ny Malagasy. Tafiditra eto Ma­dagasikara ny viriosy Covid-19, raha ny nambaran- dRamanjary Andréas, mpitsabo nentim-paharazana, misy fiantraikany amin’ny asan-dry zareo ny fisian’io aretina io. “Misy ny mieritreritra fa vokatry ny fisian’ny coronavirus, mitombo beny olona manatona anay. Tsia, ny mifanohitra amin’izay aza no hita. Antony vitsivitsy kanefa tena mafonja no mahatonga izany. Eo aloha ilay tsy fahafahana mivoaka ny trano… Fa mbola eo ihany koa ny fiheverana fa mety tsy haharesy io aretina io ny raokandro Malagasy ka aleo miantso avy hatrany ilay laharana nomena raha vao misy mampiahiahy. Antony iray lehibe ihany koa ilay zary lasa mpahay raokandro avokoany Malagasy rehetra”, hoy Ra­manjary Andréas.
Nambarany fa “mbola tena mila fitaizana ny Malagasy vao resy lahatra fa fitsaboana tahaka ny fitsaboana rehetra ihany ny an’ny mpitsabo nentim-paharazana fa tsy ilay masaka ao an-tsain’ny sasany… Fitsaboana afaka mandeha irery sady afaka mifameno ihany koa amin’ny fitsaboana tandrefana”.
Nanterin’ity mpitsabo nentim-paharazana ity hatrany anefa fa nomen-Janahary hoentina manasoa ny Malagasy monina ao aminy ireo hazo sy zavamaniry maro be ananan’ity Nosy ity, noho izany, mila ampiasaina amin’ny tokony ilana azy.